Al-Qaacida oo markii ugu horaysay fara saartay Ciidamada Naijeeriya. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Al-Qaacida oo markii ugu horaysay fara saartay Ciidamada Naijeeriya.
Last updated Jul 10, 2017 319 0
Ciidamo katirsan mujaahidiinta Jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin oo ah farac katirsan Alqaacida ayaa weerar qorsheysan waxay ka fuliyeen deegaan dhaca xuduud beenaadka ay wadaagaan dalalka Maali iyo Naijeriya, halkaasna waxay ku dileen tiro katirsan ciidamada Naijeriya.
Mu’assasada Al-Zallaaqa oo ku hadasha afka Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa baahisay war saxaafadeed ay uga hadleysa qaabka uu u dhacay weerarkaas, iyo natiijada ka dhalatay.
11-Shawaal ayaa guuto katirsan ciidamada Mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin waxay weerareen deegaanka Tasaawa ee mandiqadda Madaal oo dhacda xuduuda dalka Maali.
Sida War saxaafadeedka lagu sheegay weerarku wuxuu jawaab u ahaa xadgudubyo soo noqnoqday oo ay ciidamada Naijeriya kula kaceen dadka Muslimiinta, iyo iyagoo ku biiray dhawaan isbaheysi cusub oo loogu magac daray ciidanka Xeebaha oo ay ku dhawaaqday dowladda Faransiiska.
Dagaalyahannada Jihaadiyiinta ah waxay halkaas ku dileen tiro katirsan ciidamada Naijeriya, iyadoo kuwii soo haray ay gobota ka carareen, waxaana ay soo daabusheen Mujaahidiinta gawaari dagaal iyo saanad milliteri oo xirada tiilay.
Ugu yaraan 4 Gawaarida dagaalka oo qaarkood ay ku rakibnaayeen hubka lidka diyaaradaha ah ayay Mujaahidiintu gacanta kusoo dhigeen, sida lagu sheegay war saxaafadeedka.
Waa weerarkii ugu horeeyay oo si toos ah farac kamid ah Alqaacida uu ku beegsado ciidamada Naijeriya, waxaana muuqaneysa in awoodda Alqaacida ay sii fideyso marba marka ka dambeysa.